Dhageyso:-Janaral Mahad oo soo saaray Amar ku socda dadka degan dhulkii Ciidanka Asluubta - Awdinle Online
Dhageyso:-Janaral Mahad oo soo saaray Amar ku socda dadka degan dhulkii Ciidanka Asluubta
March 30, 2020 (Awdinle Online) –Taliyaha ciidanka Asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan ayaa digniin u diray shirkadaha iyo shaqsiyaadka boobka ku haya dhulka ciidanka Asluubta.
Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay jiraan dad heysta Dhulka Ciidanka Asluubta,sidoo kalena uu sheegay in duqa Muqdisho uu dhagax-dhogey Dhul ay leeyihiin Ciidanka Asluubta.
Dhanka kale Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo Saaray Baaq lagu mamnuucayo Isticmaalka, Boobka iyo Qaadashada Sharci-daradda ah ee lagu hayo dhammaan Dhulalka iyo Hantida Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed.
Warqad kasoo baxday Xafiiska Wasiirka Cadaaldda abuu kaate. Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxaa lagu sheegay in cid kasta oo heysata horayna ula wareegtay dhul ay leeyihiin Ciidanka Asluubta inay si deg deg ah ugu soo wareejiso ciidanka Asluubta.
Previous articleMadaxweyne Deni oo xilka ka qaaday taliye ku xigeenkii qeybta Booliiska gobolka Bari
Next articleXog:Ethiopian Airlines Dad la socday ee ka dagtay Hargeysa oo laga helay Covid-19